မည်သည့်ရှုပ်ထွေးသော ၀ က်ဘ် Native ကြော်ငြာခြင်းသည် ၀ ယ်မည်နည်း | Martech Zone
ဒီဗီဒီယိုကိုမင်းမြင်ဖူးလားမသေချာဘူး ယင်း အလုပ်အတွက်အန္တရာယ်ကင်းဘူး သို့သော်အဓိကသတင်းစာများနှင့်ရိုးရာသတင်းစာထုတ်ဝေမှုများသည်စပွန်ဆာပေးသောအကြောင်းအရာဟုလူသိများသောဇာတိကြော်ငြာ၏ပြသမှုဖြင့်ဝင်ငွေတိုးမြှင့်ရန်ရှာဖွေနေသည့်ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ လုံးဝရယ်စရာကောင်းသည်။
မူလကြော်ငြာ ကြော်ငြာရှင်သည်သုံးစွဲသူ၏အတွေ့အကြုံနှင့်ဆက်စပ်သောအကြောင်းအရာများကိုထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်အာရုံစိုက်ရန်ကြိုးစားသည့်အွန်လိုင်းကြော်ငြာနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ မူလကြော်ငြာပုံစံများသည်၎င်းတို့ထားရှိသောအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံ၏ပုံစံနှင့်လုပ်ဆောင်မှုနှစ်ခုလုံးနှင့်ကိုက်ညီသည်။
Native Advertising သည် လှည့်ဖြားတတ်သောအထူးသဖြင့်ဤအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ယုံကြည်မှုသည်၎င်းတို့တည်ရှိမှုအတွက်အဓိကဖြစ်သည်။
ရိုးရာသတင်းလုပ်ငန်းသည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုဇာတိကြော်ငြာအဖြစ်မွေးထုတ်ရန်ဖြစ်သည်။ ယုံကြည်စိတ်ချ ငွေရှာနည်း။ သတင်းမထုတ်သောအချိန်တွင်။
ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး John Oliver နဲ့သဘောမတူဘူး အချို့သောစာပေများသည်အဘယ်ကြောင့်များများထွန်းကားနေသည်ကိုသင်ကိုယ်တိုင်မေးသင့်သည်။ လူတွေဟာသတင်းအတွက်ငွေမပေးနိုင်တာကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။ သတင်းတစ်ခုကိုသတင်းတစ်ခုပေးပြီးမှငါပေးတယ်။ ဒါဟာသူတို့ကကင်လုပ်ခိုင်းထုတ်ထား။ ကြောင့်ပေးဆောင်ခံရဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
သတင်းစာလုပ်ငန်းနယ်ပယ်၌နောက်ဆုံးနှစ်များအတွင်းကျွန်ုပ်သည်သတင်း၏အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ လုံးဝစိတ်ဓာတ်ကျခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏ဒေတာဘေ့စ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဌာန၌လူသန်းပေါင်းများစွာနှင့်လူသိများသောကိရိယာတန်ဆာပလာများရှိသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် - သတင်းခန်းမှသုတေသီတစ် ဦး သည် Desktop အဟောင်းကိုထိုးဖောက်ပြီးသူ၏အလုပ်ကိုလုပ်ရန် Google မှလွဲ၍ မည်သည့်ကိရိယာမျှမရှိသည်။ သူကအံ့ဖွယ်အမှုအချို့ကိုဖယ်ထုတ်ပြီးသူ၏နှလုံးကိုအလုပ်လုပ်သည်။ သို့သော်အောက်သို့လှည့်ထွက်သွားသည်ကိုငါပြောနိုင်သည်။ သတင်း၏ဆောင်းပါးများတွင်ကော်ပိုရိတ်ဆန့်ကျင်ရေးစိတ်ဓာတ်သည်စက်မှုလုပ်ငန်း၏ကိုယ်ပိုင်လောဘကြောင့်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ကျွန်တော်တို့မှာအမြတ်အစွန်း ၄၀% ရှိပြီးအယ်ဒီတာအဖွဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုဖြတ်တောက်တဲ့အခါငါရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှတ်မိနေတယ်။ ဟုတ်ပြီ
ယနေ့မည်သည့်သတင်းဌာနမှမဆိုလူမှုရေးဆိုင်ရာသတင်းများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ၊ ၎င်းတို့သည်စူပါမားကတ်နာမည်ကြီးအနုပညာရှင်တစ် ဦး ကဲ့သို့ဖြစ်ပုံရသည်။ ၎င်းတို့သည်ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်များ၊ အားကစားရမှတ်များနှင့်ရာဇ ၀ တ်မှုများတို့ကိုမိနစ် ၃၀ (သို့) မိနစ် (၆၀) ၀ န်းကျင်သို့ ၀ င်ရောက်စီးနင်းနိုင်သည့်အတိမ်အနက်မရှိသည့်စျေးပေါသောအတိုကောက်များအပေါ်အချိန်များစွာပေးကြသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီဟာကဘယ်အရင်းအမြစ်မှမဆိုရရှိနိုင်တဲ့အချက်အလက်ပဲ။ များသောအားဖြင့်သတင်းထောက်များက၎င်းထံမှရရှိသောသတင်းအရင်းအမြစ်များတူညီကြသည်။
ဒီနှစ်မှာတော့ဒေသဆိုင်ရာရန်ပုံငွေရှာသူကိုကြေငြာဖို့ဒေသတွင်းသတင်းတွေကြောင့်ကျွန်တော် ၀ မ်းသာခဲ့တယ်။ ကျနော်တို့ကအစိတ်အပိုင်းနှင့်အတူအသက်ရှင်သွားခဲ့ကြသည်အဖြစ်ငါသတင်းထောက်နှင့်အတူစက္ကန့် 20 လောက်နေခဲ့ရသည်။ နောက်ခံအင်တာဗျူးမရှိ၊ ထိုးထွင်းသိမြင်မှုမရှိ၊ နက်ရှိုင်းမှုမရှိ၊ ငါစတူဒီယိုသို့ herded ခဲ့သည်, ပွဲချင်းပြီးပြု။ , ထို့နောက်ထွက် herded ။ ကျွန်တော့်ဇာတ်လမ်းကအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်ရက်အနည်းငယ်တူးခြင်းဟာလူအများရဲ့နှလုံးကိုထိမိပြီးရုပ်သံလိုင်းကိုအာရုံစူးစိုက်စေနိုင်တဲ့မရေမတွက်နိုင်တဲ့ပုံပြင်တွေကိုဖန်တီးနိုင်ခဲ့တယ်။
အတွက်ပိုက်ဆံယူခြင်းအားဖြင့် ဇာတိကြော်ငြာဒီသတင်းတွေကသူတို့ယုံကြည်စိတ်ချလို့မရဘူးလို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင်မယုံကြဘူး. သူတို့တက်လိုက်ပြီ.
ပြနာကသတင်းတွေမရောင်းနိုင်တာကြောင့်သတင်းဆိုင်တွေကမထောက်ပံ့တာပါ အဘိုး လူတွေမျှော်လင့်ထားတယ်။ သတင်းသည်နိုင်ငံရေးသမားများအတွက် ၀ ါဒဖြန့်ချိရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုယခင်ကထက် ပို၍ လိုအပ်လာလျှင်စီးပွားရေး၌စီးပွားရေးဆန့်ကျင်နေသည်။ သတင်းကို ဦး ဆောင်သူများသည်ယုံကြည်မှုအားဇာတိကြော်ငြာကိုချိုးဖောက်ရုံသက်သက်မဟုတ်ဘဲ၎င်းတို့သည်အရှုပ်အထွေး၊ ရေတိမ်ပိုင်းနှင့်အဝါရောင်သတင်းစာဆရာများအပေါ်လူထုအပေါ်သူတို့၏ယုံကြည်မှုကိုပျက်ပြားစေခဲ့သည်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါကနည်းပညာဘလော့ဂ်ကိုဖတ်တာ၊ ရိုးရာမီဒီယာတွေထက်ကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာ Podcast တခုကိုနားထောင်တာအကြောင်းအရင်းကအကြောင်းအရာကိုအကြောင်းအရာကိုနက်နက်နဲနဲနားလည်တဲ့ပညာရှင်များဖြင့်ပြုလုပ်သောကြောင့်၎င်းတို့သည်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအတွက်အချိန်မီဖြစ်ပြီး၊ အမှန်တရား သတင်းနှင့်နည်းပညာအကြောင်းပြောသောသတင်းကိုကျွန်ုပ်ကြည့်ရှုသည်။ အသိပညာဗဟုသုတမရှိခြင်းကြောင့်မျက်နှာကိုရှက်ရွံ့စွာဖုံးကွယ်လေ့ရှိသည်။ လူမှုရေးမီဒီယာကိုလည်းကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်များမှသတင်းအချက်အလက်များကိုရယူရန်နှင့်ကျွန်ုပ်နှင့်ဆက်သွယ်သောကောင်းမွန်သောအသိပညာရှိသည့်အုပ်စုများမှအမြင်များကိုရယူရန်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဤသည်ကအလျင်စလိုဂျာနယ်လစ်တစ် ဦး ၏လွဲမှားသောထင်မြင်ယူဆချက်ကိုမဟုတ်ဘဲကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်နားလည်မှုကိုရှာဖွေပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေမည့်သတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးသည်။
ဘေးထွက်မှတ်စု…သတင်းလုပ်ငန်းသည်ဘလော့ဂါများနှင့်ဘလော့ဂ်များကိုဖျက်ဆီးရန်ကြိုးစားစဉ်သတိရပါ။ သူတို့ကစက်မှုလုပ်ငန်းကိုမုန်းသည်၊ စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်အောက်တွင်သူတို့၏ကာကွယ်မှုကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ပင်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သည်။ သူတို့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အချိန်မှာသတင်းစာတွေကဘလော့ဂ်ဘက်ကိုလှည့်လာပြီးအခုသူတို့ဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်အကြောင်းအရာထုတ်လုပ်မှုထဲကိုရောက်နေပြီလား။ Wow ... တစ်ရှစ်ဆယ်အကြောင်းပြောဆို!
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် Native Advertising ကိုရှောင်ရှားသင့်သည်
၎င်းသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်လည်းပြaနာဖြစ်နိုင်သည်။ အွန်လိုင်းပေါ်ရှိဖောက်သည်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်လုပ်ငန်းအားလုံးတွင်ကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာဘလော့ဂ်နှင့်လူမှုမီဒီယာများကိုမြှင့်တင်ရန် - အားလုံး၏အဓိကဗဟိုချက်မှာစာဖတ်သူ၏ယုံကြည်မှုနှင့်အခွင့်အာဏာကိုရရှိရန်ဖြစ်သည်။ ယုံကြည်မှုမရှိပဲဖုန်းကိုကောက်ကိုင်ကာသင်နှင့်စီးပွားရေးလုပ်လိုသောလူအနည်းငယ်သာရှိသည်။ ယုံကြည်မှုဆိုတာအရာအားလုံးပါပဲ ဇာတိကြော်ငြာ ၎င်းသည်လှည့်စားခြင်း၏အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်အလံအနည်းငယ်ထည့်ခြင်းဖြင့်ကမကထပြုသောအကြောင်းအရာများသည်လှည့်ဖြားရန်ရှိသည့်အချက်ကိုမပြောင်းလဲစေဟုဆိုသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤဘလော့ဂ်တွင်ပါဝင်သောအကြောင်းအရာများကိုပေးဆောင်ခြင်းမရှိပါ။ ကျနော်တို့ကအဲဒါကိုအတိတ်ကစမ်းသပ်ခဲ့ပြီးအဲဒါနှစ်ခုလုံးကကျရှုံးခဲ့သလိုငါတို့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေခဲ့တယ်။ ယခုတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်တက်ကြွသောကြော်ငြာများကိုမြှင့်တင်ရန်စုဆောင်းထားသောစပွန်ဆာများရှိပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အကြောင်းအရာတွင်လည်းသူတို့ကိုမကြာခဏဖော်ပြလေ့ရှိသည် - သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ငွေကြေးဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှုကိုအလွန်အမင်းသတိထားမှုမရှိခြင်းနှင့်အတူ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စပွန်ဆာများကိုမည်သည့်ကတိက ၀ တ်များနှင့်မည်သည့်အရာကိုရေးသားမည်ကိုကတိမပေးပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်aည့်သည်စာရေးသူတစ် ဦး ပေါ်သို့ရောက်သောအခါကျွန်ုပ်တို့၏ပထမဆုံးညွှန်ကြားချက်မှာ၎င်းတို့သည်အကြောင်းအရာများကိုမည်သည့်နည်းဖြင့်မဆိုငွေပေးချေလျှင်၎င်းတို့ကိုပစ်ခတ်လိမ့်မည်၊ ပို့စ်ကိုဖျက်ပစ်မည်ဖြစ်ပြီးတရားဥပဒေအရအရေးယူနိုင်သည်။ သူတို့ကိုစာရေးဆရာဇီဝနဲ့ရောင်းဖို့ပြောတယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ပို့စ်များကိုသတင်းအချက်အလက်ဖြစ်စေချင်သည် - စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများဖြင့်ဝိုင်းရံထားသော်လည်း၎င်းကိုလှည့်စားရန်မကြိုးစားပါ။ Hmmm ... ရိုးရာသတင်းရဲ့ရှေးကာလကိုမင်းသတိရစေသလား။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအနေဖြင့် infographic နှင့် whitepapers ကဲ့သို့သောအကြောင်းအရာများထုတ်လုပ်ရန်အကူအညီလိုအပ်ပါက၎င်းကိုဖန်တီးပြီး၎င်းကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမည် သူတို့၏ ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုမြှင့်တင်ပါ သူတို့၏ ကွန်ယက်များ…ပြီးတော့ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်မှ - ငြင်းဆိုချက်များဖြင့်ဖော်ပြလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုဒ်ဖော်ပြချက်ကပင်လူများအားသူတို့၏ site သို့ပြန်ပို့ပေးလိမ့်မည်။ ကျနော်တို့မျက်လုံးများအတွက်ယှဉ်ပြိုင်ရန်မကြိုးစား, ငါတို့စာဖတ်သူတွေကိုတန်ဖိုးပေးဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘယ်တော့မှမဝေငှခဲ့တဲ့ဖောက်သည်တွေအတွက်အကြောင်းအရာများစွာဒါဇင်ပေါင်းများစွာထုတ်လုပ်ခဲ့တယ်။
ကျွန်တော်တို့ဟာသတင်းထွက်ပေါက်တောင်တောင်မှမရှိဘူး။ ဒီမှာပရိသတ်နဲ့လူထုရဲ့တိုးတက်မှုကပေးတဲ့တာ ၀ န်ကိုအသိအမှတ်ပြုတယ်။ ထိုအခါမူကားကျွန်ုပ်တို့သည်စီမံခန့်ခွဲမှုအလွှာများစွာရှိသောဗျူရိုကရေစီယန္တရားအတွက်ပေးဆပ်ရန်နှင့်စီမံရန်မလိုပါ။ ဤဆိုင်များမှပေးသောသတင်း၏တန်ဖိုးသည်အများပြည်သူအတွက်အမှန်တကယ်တန်ဖိုးရှိမှုအတွက်ရိုးရှင်းစွာပြုပြင်နေသည်။ သူတို့အယ်ဒီတာ့ဝန်ထမ်းများကိုအားပေးရန်နှင့်ဝင်ငွေတိုးမြှင့်မည့်အစားအရည်အသွေးကိုအာရုံစိုက်ရန်လိုသည်။ အခွန်ဘဏ္trustာရေးယုံကြည်မှုနှင့်အတူလာပါတယ်။
Native Advertising တိုးတက်မှု
photo: ယောဟနျသမှာ Oliver နှင့်အတူပြီးခဲ့သည့်ရက်သတ္တပတ်ယနေ့ည
Tags: မာတိကာရယ်စရာကိုဗီဒီယိုHBOJohn Oliverသတင်းစာရေးအတတ်ပညာခွေးရူးဇာတိကြော်ငြာသတင်းဆိုင်များတွင်သတင်းစာတွေကြေညာသူကမကထအကြောင်းအရာရိုးရာမီဒီယာဇာတိကြော်ငြာကဘာလဲ